ရေနံကုန်သည်တို့အတွက် စိတ်ဝင်စားစရာ အခွင့်အလမ်းကောင်းတစ်ခုပါ
ကမ္ဘာအနှံ့ကို တင်ပို့ရောင်းချနေရတဲ့ကုန်စည်တစ်ခုဖြစ်တာကြောင့် ရေနံဟာ ကမ္ဘာ့အရေးကြီးကုန်စည်တစ်ခုပဲဖြစ်ပါတယ်. ယနေ့ခေတ်အခါမှာ အဓိက ကမ္ဘာ့ရေနံဈေးကွက်ကြီး နှစ်ခုရှိပါတယ်. တစ်ခုကတော့ အမေရိကန်ရေနံဈေးကွက်၊ အများအားဖြင့် တက္ကဆက်ပြည်နယ် အနောက်ပိုင်းရေနံဈေးကွက်(WTI) နဲ့ ယူကေရေနံဈေးကွက် Brent Blendတို့ပဲဖြစ်ကြပါတယ်.
၂၀၁၆ကတည်းကနေ ရေနံဈေးဟာ တစ်စည်ကို ၂၇$ကနေ $၅၀ကြားအပြောင်းအလဲရှိခဲ့ပါတယ်. ရေနံရောင်းဝယ်တာက အမြတ်များစွာရရှိစေပါလိမ့်မယ်.
အရှေ့အလယ်ပိုင်း ရေနံထုတ်လုပ်တဲ့နိုင်ငံများအဖွဲ့ အိုပက်နဲ့ အမေရိကန်တို့ဟာ ဒီဈေးကွက်မှာ သူနိုင်ကိုယ်နိုင်အပြိုင်ကြဲနေကြတဲ့အတွက် ရေနံကို အရောင်းအ၀ယ်လုပ်မယ့်သူတွေအတွက် ဈေးတက်တက် ကျကျ အကျိုးအမြတ်ရယူနိုင်မယ့် အခွင့်အရေးကောင်းတွေရှိနေပါတယ်.
သင့်ရဲ့အမြတ်ငွေ ပိုမိုတိုးပွားလာစေမယ့် အခွင့်အရေးကောင်းတစ်ခုပါ. FBSအဖွဲ့သားတွေကလဲ သင့်ကို အကူအညီပေးဖို့အဆင်သင့်ရှိနေပါတယ်.
ကျွန်ုပ်တို့၏အကူအညီပေးရေးအဖွဲ့ မှဖြေကြားပေးဖို့ ၂၄/၇ အချိန်ပြည့် သင့်ရဲ့မိခင်ဘာသာစကားနဲ့ပါ အကူအညီပေးရန်လဲ အဆင့်သင့်ရှိနေတဲ့အကြောင်းကို သင်မှတ်မိလိမ့်မယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ်. ဘယ်လိုမေးမြန်းမျုမျိုးကိုမဆို နွေးထွေးစွာကြိုဆိုလျှက်ပါ!